राप्तीका विशिष्ट प्रतिभा सूदन | Saugat : Naya Yougbodh
राप्तीका विशिष्ट प्रतिभा सूदन
के. एल. पीडित
पछिल्लो समय संगीतकारको लोकप्रिय छवि बनाएका सूदन थापा कलाका सबै बिधामा उत्तिकै पारंगत छन् । उनले प्रायः सबै विधामा आफ्नो विशिष्ट सिर्जना सामथ्र्य साबित गरिसकेका छन् र आफ्नो परिचय निकै फराकिलो औ अग्लो बनाएका छन् । नायक, निर्देशक, गीतकार र संगीतकारको रुपमा उनी राप्तीमा स्थापित छन् ।
राप्तीका एक विशिष्ट एवं बहुप्रतिभा हुन् उनी । बुबा टेकबहादुर थापा र आमा अमृता थापाको कोखबाट रुकुम रुकुमकोट–३ ह्याप्लामा जन्मेका उनी हाल दाङमै बस्छन् र दाङलाई उनले सिर्जनाको कर्मथलो बनाएका छन् । यहींबाट उनले राष्ट्रियरुपमा आफ्नो सिजर्नात्मक उपस्थिति जनाइरहेका छन् ।
बाल्यकालदेखि नै सूदनमा कला क्षेत्रप्रति गहिरो अभिरुचि थियो । कला क्षेत्रमा आफ्नो अर्थपूर्ण परिचय स्थापित गर्ने हुटहुटी र आकांक्षा थियो । विद्यालय तहको पढाइ सकेर उनी पूर्णरुपमा कला क्षेत्रमा समर्पित भए । निष्ठा र समर्पणले उनलाई छोटो समयमा लोभलाग्दो सफलता दिलायो । कलामा गहिरो साधना चाहिन्छ भन्ने कुरा उनले प्रमाणित गरिदिए ।
शुरुमा उनमा अभिनयमा विशेष अभिरुचि र नायक बन्ने आकांक्षा निकै जब्बर थियो । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा दाङ झरेपछि उनले त्यो आकांक्षा पूरा गर्ने अवसर पाए । उनले अंकित डिसी निर्देशित चलचित्र अन्तिमपल्टमा नायकको रुपमा डेब्यू गरे । चलचित्र तयार भएपछि पर्दामा आफूलाई हेर्दा नायक सूदनलाई निकै अनौठो अनुभूति भयो । ‘मलाई त कस्तो–कस्तो भयो, मन हर्षले विभोर भयो । आँखा आँसुले भरियो ।’ सूदनले ती दिनहरुको स्मरण सुनाए ।
त्यो उनको हर्ष र गौरवको आँसु थियो । मनको सुदूर कुनामा बाल्यकालदेखि सुषुुप्त अवस्थामा रहेको सपना साकार हँुदा सूदनले मन थाम्न सकेनन् । यस चलचित्रको प्रदर्शनपछि उनको अभिनय क्षमता र व्यक्तित्वको सर्वत्र प्रशंसा भयो । राप्ती क्षेत्रमा निर्माण हुने प्रायः चलचित्रमा उनी अनुबन्धित हुन थाले । उनले अहिलेसम्म चलचित्र छलबाटो, उहिले बाजेको पालामा, परीलगायतका चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् ।
सूदन एक सफल चलचित्र निर्देशक पनि हुन् । उनले निर्देशन गरेको यार्साको खोजीमा अत्यधिक चर्चामा रहेको चलचित्र हो । यसमा यार्सा टिपेर जीवनको विपन्नता हटाउन चाहने रुकुमेलीहरुको सपना, यार्सा टिप्न बुकी जाँदा व्यहोर्नुपर्ने कठिनाई, जोखिम, लुटपाट र संघर्षलाई औधी कलात्मकरुपमा देखाएका छन् । यार्सा खोज्न जाँदा ज्यानसमेत जोखिममा राख्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको सार्थक चित्रण गरिएको छ यार्साको खोजीमा ।
यो चलचित्र निर्माण गर्दा उनले पनि निकै ठूलो जोखिम उठाउनु परेको थियो । बुकी लेकमा अक्सिजनको कमी हुँदा उनीलगायत पूरै युनिट बिरामी भएको थियो । अर्कोतिर हिमपहिरोको पनि जोखिम उस्तै थियो । बिरामी अवस्थामा पनि काम गरेर उनले चलचित्र यार्साको खोजीमा पूरा गरे र नेपाली चलचित्र क्षेत्रको समृद्धिमा एक इँटा थपे ।
पछिल्लो समय भने सूदन संगीतकारको रुपमा बढी लोकप्रिय छन् । उनले संगीतबद्ध गरेका गीतहरु श्रोताहरुले अत्यधिक रुचाएका छन् । उनको व्यस्तता पनि ह्वात्तै बढेको छ । अब विशेषरुपमा संगीततर्फ केन्द्रित हुने सूदनको योजना छ । ‘अब संगीतलाई नै अगाडि बढाउँछु । श्रोताहरुले मेरो संगीत मन पराउनु भएको छ । दिनहुँ संगीतको लागि अफर पनि आइरहेको छ ।’ सूदनले बताए ।
अन्तिमपल्ट वानसाइड लभ चलचित्रदेखि थुप्रै आधुनिक गीतहरुमा सूदनले संगीत दिएका छन् । उनको संगीत तथा राजेश पायल राई र बिन्दू परियारको स्वरमा रहेको ‘पग्लियो, पग्लियो मायाको मन पग्लियो’ बोलको गीत दर्शकले अत्यधिक रुचाएका छन् । भर्खरै मात्र रेकर्ड गरिएको करन बुढामगरको स्वरमा रहेको ‘तिमी र म सोल्टिनी’ बोलको गीतमा उनको संगीत पनि निकै लोकप्रिय हुँदै गएको छ ।
संगीत सिर्जनालाई उनी एक गम्भीर कार्यको रुपमा स्वीकार गर्छन् । शब्दको भावमा डुबेर नयाँ लय सिर्जना गर्नु र श्रोताहरुमा एक गम्भीर प्रभाव प्रवाह गर्नु उनलाई निकै चुनौतिपूर्ण लाग्छ । यसका लागि निकै गम्भीर साधना गर्नुपर्ने सूदनको अनुभव छ ।
नायक, निर्देशक, संगीतकार सूदन र उनको बुबाको सपना र रुचिबीच शुरुमा केही स्वभाविक दूरी र अन्तर्विरोधहरु थिए । बुबा सूदनलाई इञ्जिनियर बनाउन चाहनुहुन्थ्यो । कला क्षेत्रप्रति उहाँलाई उस्तो रुचि थिएन । तर सूदन भने लुकीछिपी कला क्षेत्रमा क्रियाशील भइरहे । यही कारण कतिपय अवस्थामा बाबुछोराबीच केही खटपट र द्वन्द्व पनि भए । यद्यपि उनको सबैभन्दा ठूलो आदर्श बुबा नै हुनुहुन्छ । कला क्षेत्रप्रतिको आफ्नो अभिरुचिलाई छोड्न नसके पनि बुबाको सपनालाई कहिल्यै हाँक दिएका छैनन् उनले । बरु बुबाको सपना पनि एकदिन साकार बनाइछाड्ने दृढ संकल्प गरेका छन् ।
अहिले भने स्थिति केही बदलिएको छ । सूदनको कला यात्रालाई उहाँको सहयोग र समर्थन छ । यस कुराले सूदनलाई निकै उत्साहित र गौरवान्वित बनाएको छ । ‘अहिले बुबाले समर्थन दिनुभएको छ । बरु राम्रोसँग लाग्नू, इज्जत नफाल्नू भन्नुहुन्छ’ सूदनले भावुक शैलीमा बताए ।
सूदन एक उम्दा गायक पनि हुन् । उनको गायकी पनि उस्तै दमदार छ । उनले थुप्रै गीतहरुमा स्वर दिएका छन् । उनी गीत पनि आफै रचना गर्छन् । आफ्नै रचना र संगीतमा गीत जीवन्त बन्ने उनको अनुभव छ ।
जब फर्केर सोच्छन्, सूदनलाई सबै कुराले निकै भावुक, रोमाञ्चक र गौरवान्वित बनाउँछन् । अभिनय, निर्देशन, रचना, गायन र संगीतमा उनले पाएको सफलता र प्रशंसाले उनलाई दुःख र संकटमा अघि बढ्ने प्रेरणा दिन्छन् भने बुबाको आदर्श र सपनाले जीवनको गम्भीर दायित्वबोध गराउँदछ ।
नेपाली कलासंगीतलाई समृद्ध औ गौरवान्वित बनाउन संकल्परत बहुमुखी प्रतिभाका धनी सूदन थापा सिर्जनायात्रामा अनवरत यात्रारत् होऊन्, शुभकामना ।